Obama iyo Netenyahu oo ku kulmaya aqalka-cad ee Maraykanka - BBC News Somali
Obama iyo Netenyahu oo ku kulmaya aqalka-cad ee Maraykanka
20 Maajo 2011
Image caption Obama iyo Netenyahu
Isagoo ku baraarugay khudbadii uu shalay jeediyey madaxweyne Barack Obama oo ku aadaneyd bariga Dhexe, ayaa Raiisul wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu wuxuu maanta wadahadal u tagay Washinton, wadahadalo ka dhacay aqalka cad.
Jawaabta rasmiga ah ee Israel ka bixisay khudbaddii Obama ee lagu sheegay heshiiska labada dal ee ku salaysnaa xudduudihii sanadkii 1967 iyo dhul kala wareegsasho, ayaa jawaabtaasu ay ahayd mid aan wanaagsanayn
Faallo qorayaasha Isreal way ku qeybsameen, Khudbada Obama, Balse, weriyahayaga dhianca difaaca Jonathan Marcus, wuxuu sharaxayaa, in ay adag tahay sida ay iskula saan-qaadi karaan, sida oo Obama wax u arko iyo sida uu Netenyahu wax u arko.
Kala duwanaanshaha dhinacyada
Mid ka mid khubarada Maraykanka ayaa si nidaamsan ugu tilmaamay kulanka maanta dhexmaraya madaxwayne Barack Obama iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netenyahu, in ay noqonayso mid u dhaxaysa "madaxwayne, 'haye waan awoodaa' iyo 'ra'iisul wasaare maya ma awoodi doontid".
Mr Obama si daran ayuu u doonayaa in uu qorshaha nabadda Israel iyo Falastiiniyiinta horay ugu sii wado.
Wuxuu ku cadeeyay hadalkiisa shalay in uu rumaysan yahay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyinta ay waajib tahay in ay ka faa'iidaystaan isbadalka guud ee ballaaran ee ka jira gobolka oo ay horumar sameeyaan.
Israel, ayuu sheegay in ay waajib tahay in ay u diyaargarowdo in ay tallaabooyin geesinimo leh ay u qaaddo dhinaca nabadda.
Mr Netanyahu ayaa dhinaciisa wuxuu arkaa in isbadallo waawayn ay ka socdaan bariga dhexe, iyadoo ugu yaraan muddada gaaban ay yihiin kuwa xasilooni darro abuur ah.
Image caption Palestine
Hogaamiyihii dalka Masar Xusni Mubarak, ayaa xoog u difaaci jiray in sida uu yahay lagu ilaaliyo xiriirka uu la lahaa Israel, ayaa lagu qasbay in uu xukunka ka dego.
Wadaxaajoodka ka dhexeeya laba koox ee Falastiiniyiinta, Fatah iyo Xamaas, ayaa Israel ay ka walwalsan tahay maadaama Xamaas ay wali rumaysan tahay in halgan military dib loogu qabsan karo dhulka Falastiin.
Soo kicitaanka dhowaan ee dibadbaxyada Falastiinta guud ahaan xadka Israel la leedahay Israel ayaa Israel u ah mid ay ka walwalsan tahay in uu kiciyo tallaabo guud Falastiiniyiintu qaadi karaan oo soo socota.
Hadaba, muuqaalka guud uma eka in uu suurtagal yahay in uu ku dhiirigaliyo Israel in fursado badan u bannaan yihiin.
Mr Obama iyo Mr Netanyahu ayaa sinaba isugu dhowayn.
Waxaa yar iswaafaqa ka dhaxayn kara labada, taas ayaana xitaa wax u sii dhimaysa horumarka la gaari kari lahaa.
Mr Netanyahu waxaa suurtagal ah in uu yahay nin siyaasi ka badan ee uu yahay wadani.
Walwalkiisa ugu wayn waa xasiloonada isbahaysiga baarlamaanka dalkiisa, sidaas awgeedna damaciisu wuu yar yahay amaba sida uu u doonayo in uu aqbalo cadaadiska Maraykanka.